I-ameethst ye-Goethite, ebizwa nangokuthi nge-cacoxenite amethyst - ividiyo
Amathegi Amethiste, I-Cacoxenite, Goethite
Thenga i-amethyst yemvelo esitolo sethu
I-Goethite amethyst, ebizwa nangokuthi nge-cacoxenite amethyst
Othile wake wabiza lokhu kufakwa njenge-cacoxenite ngenxa yokufana okungafani naleyo mineral, kepha i-amethyst ene-cacoxenitemay ayikho.
Ngokomlando ibizwa nge-cacoxenite eBrazil. Akubanga isikhathi eside kakhulu lapho kwenziwa ucwaningo olunamandla futhi ngaleso sikhathi kwase kwephuze kakhulu ukushintsha umshini wokumaketha kanye nomkhuba wabantu wokuwubiza nge-cacoxenite.
Ama-Goethite inclusions akha izigaxa ezijwayelekile kakhulu zephuzi kuya kwezinalithi ezinsundu ezibukeka zifana nomshanelo.
Lokhu okubalulekile kufana ne-amethyst evela e-Ametista do Sul, eyayaziwa ngokuthi yi-Sao Gabriel, iRio Grande do Sul, eBrazil.
IGoethite iyi-oxyhydroxide yensimbi equkethe i-ferric iron. Kuyinto ingxenye eyinhloko yokugqwala ne-bog iron ore. Ubulukhuni bukaGoethite busuka ku-5.0 kuye ku-5.5 ku-Mohs Scale, futhi amandla ayo adonsela phansi ahluka kusuka ku-3.3 kuye ku-4.3. Amaminerali akha amakristalu anjengezinaliti afana nensimbi, insimbi yensimbi, kepha ubukhulu bawo bukhulu kakhulu.
I-Feroxyhyte ne-lepidocrocite womabili la ma-polymorphs e-iron oxyhydroxide FeO (OH) azinzile ngaphansi kwengcindezi nezinga lokushisa lomhlaba. Yize benendlela efanayo yamakhemikhali njenge-goethite, izakhiwo zabo ezihlukene zamakristalu zibenza babe namaminerali ahlukile.
Ngokwengeziwe, i-goethite inama-polymorphs amaningana acindezelwe kakhulu futhi anezinga eliphezulu lokushisa, okungahambisana nezimo zangaphakathi komhlaba.
I-Amethyst iyinhlobo e-quartz ebubende onsomi futhi ikhipha umbala wayo we-violet kumalahle we-irradiation, ukungcola kwensimbi kwezinye izimo nezinye izinsimbi zokuguqula isimo, kanye nokuba khona kwezinye izinto zokulandela umkhondo, okuholela ekungeneleleni okuyinkimbinkimbi kwe-crystal lattice. Ubulukhuni bezimbiwa buyafana ne-quartz, ngaleyo ndlela buyenza ifanele ukusetshenziswa ubucwebe.
I-Amethyst yenzeka kuma-hues ayisisekelo ukusuka ku-pinkish violet okhanyayo kuya onsomi onsomi. I-Amethyst ingabukisa i-hues eyodwa noma zombili lezi zibomvu, zibomvu nezihlaza okwesibhakabhaka.
Okujula ziyahlukahluka kakhulu, umbala amethiste livame aliveza imivimbo zifana kuya ubuso sokugcina salolu crystal. Esinye isici in the art of wamatshe ayigugu kuhlanganisa ukushukunyiswa imizwelo ngendlela efanele ukusika itshe ukubeka umbala ngendlela eyenza umoya gem kokuqendwa homogeneous. Ngokuvamile, iqiniso lokuthi ngezinye izikhathi kuphela nomzimba omncane ebusweni ungqimba color violet ukhona itshe noma ukuthi umbala akuyona kwenza eyohlobo for osezingeni nzima.
Goethite amethyst waseBrazil
Amathegi Amethiste, Trapiche
Amathegi Amethiste, crystal, Quartz